Sarkaal ka tirsan Al-shabab oo lagu dilay Jubbada Hoose | KEYDMEDIA ONLINE
Sarkaal ka tirsan Al-shabab oo lagu dilay Jubbada Hoose
Sarkaal ka tirsan Al-shabab oo lagu magacaabo Aadan Yuusuf ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay Jubbada Hoose.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan Komaandooska Danab ayaa howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ku dilay sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Shabaab.
Warbaahinta ciidamada Dowlada ayaa baahisay in sargaalka ciidamada Dowlada dileen oo lagu magacaabayay Aadan yuusuf Shiikh Maxamuud (Abuu Salmaan) uu ahaa Madaxii Al Shabaab u qaabilsanaa diyaarinta qaraxyada.
Ciidamada dowladda ayaa weeraray guri ku yaallo degmada Jamaame oo uu deganaa sarkaalka, waxaana sidoo kale weerarka lagu dilay afar ka mid ah ilaaladiisa oo dagaal la galay ciidamada dowladda.
Howlgalka xilliga uu dhacay lama sheegin, waxaana xusid mudan in ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland oo is garabsanaya maalmahaan howlgallo joogta ah kawadaan gobollada Jubbooyinka iyo Gedo oo ay ku suganyihiin Al-Shabaab.
Dhinaca kale majiro wax war ah oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan sheegashada dowladda ee sarkaalka iyo ilaaladiisa la dilay, balse Al-Shabaab ayaa inta badan magacyada saraakiisha la dilay shaaciso xilliyo dambe.